You are at:Home»SPORT»Bagoduke bexolile abalandeli yibhola yaseMakhanda
By Azlan Makalima on	 September 22, 2019 SPORT
Abathandi nabaxhasi bebhola balapha eMakhanda badele ingqele ebiqhaqhazelisa amazinyo ngoMgqibelo beyokuxhasa amaqela abo ohlukeneyo. Oompondo zihlanjiwe balapha ekhaya bebehlangene bejijisana kwitumente yokuvula eququzelelwa yiMakana LFA engumbutho olawula ibhola apha eMakhanda.
Lemidlalo yokuzivavanya ibibanjelwe kwibala elilikhaya lebhola ekhatywayo iJD Dlepu emva kwethuba elide bengasadlali oompondo zihlanjiwe. Lemidlalo itshayelelwe yimidlalo yabo bangaphantsi kweminyaka elishumi elinesihlanu eye yasusa umbethe phambi kokuba kungene ooxholovane.
Kweminye yalemidlalo, iSophia Stars ethande ukungabi nalusini mvanje ibethe iEluxolweni ngamanqaku angamashumi anesihlanu eqandeni, logama yona iGolden Brothers ibethe iJoza Callies ngamane eqandeni.
IGrahamstown United ibhaxabule abatshakazi iBlack Stars ngamathathu eqandeni. Kumdlalo wokuqala wetumente yamaqela amakhulu, iAttackers idlulele kwisigaba esilandelayo saletumente emva kokungafiki ebaleni kwe Fingo United.
Kumdlalo obuvutha amadangatye nobunzima kakhulu, ISakhulutsha ibuye ngamandla sele isilela ngenqaku ngasemva yaze yabetha iJacaranda Aces ngamanqaku amabini kwelinye.
Iqela elidlala kwiSAB League iCity Pirates ibethe iintshatsheli zeNew Year’s Cup IGrahamstown United ngamanqaku amabini kwelinye komnye umdlalo obuthande ukuba nzinyana.
Kowokugqibela wosuku iNewseekers izibethele iYoung Eagles ngamabini kwelinye.
NgeCawa iqela laseRhodes lidlale ngenqwaba yamathuba yaze yahlawuliswa kabuhlungu yiSophia Stars ngethuba itywatyushwa ngamabini kwelinye.
Bonke abo baye badela loo nkwankca yangoMgqibelo, bagoduke bexolile emva kokubona indlela lamaqela ebezimisele ngayo kuletumente.